देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोले यी ५ झुट हेर्नुहोस
काठमाडौं, १० जेठ–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव आफूले गरेकोले आफू सफल प्रधानमन्त्री भएको दावी गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।
देशवासीका नाममा संम्बोधन गर्दै दाहालले आफैंले २० वर्ष देखि हुन नदिएको स्थानीय चुनाव गराएको भन्दै जस लिन खोजेका थिए । माओवादी हिंसाकै कारण २० वर्षदेखि स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेको थिएन, जुन चुनावको पहिलो चरण आफूले गरेको जस लिंदै दाहाल विदा भएका हुन् ।
सम्बोधनमा दाहालका ५ झूठ
देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलेको पहिलो तथ्य नै झूठ फेला परेको छ । उनले सम्बोधनका क्रममा पहिलो वाक्य बोले– ‘म संसदमा आफ्नो सम्बोधन गर्न चाहन्थेँ तर, संसद हिजोदेखि अवरुद्ध भएपछि सिधै देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दैछु ।’
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले संसद अवरोध थियो भने पनि संसद अवरोध थिएन । सभामुख ओनसरी घर्तीले सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । यसअघि प्रतिपक्षीले बेल घेराउ गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तुत गर्ने सभामुख घर्तीले संसद आफैंले सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले प्रधानमन्त्री सम्हालेपछि आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याएको दावी गरे । तर, अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेटले नै आर्थिक बृद्धिदरलाई ७ प्रतिशत पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक बृद्धिदर बजेटले हासील गर्ने हो भन्ने पनि दाहालले बुझेका देखिएन । आर्थिक बृद्धिदर बजेटले ल्याएको हो जुन अघिल्लो ओली सरकारको बजेट हो ।
दाहालले अर्काे झुठ बोले, विद्युत आयात गरेर र २ महिनामै माथिल्लो खिम्ति बनाएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको वताए । तर, भारतसँग विद्युत आपूर्ति गर्ने सम्झौता केपी ओलीको सरकारले गरेको थियो भने खिम्ति आयोजनालाई पनि ओली सरकारकै पालामा तीब्रता दिइएर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याइएको थियो । त्यही दुई महिनाको बीचमा खिम्ती राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको थियो । तर, दाहालले दुई महिनामै खिम्ती आयोजना बनाएर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको दावी गरे । जुन झुठो थियो ।
फास्ट ट्रर्याक आफूले नेपाली लगानीमै बनाउन लागेको भन्ने अर्काे झुठ दाहालले प्रस्तुत गरे । जनस्तरबाट तीब्र दवाब पछि नले द्रूतमार्ग नेपाली लगानीमै बनाउने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयमा समर्थन जनाएका थिए । अव भन्ने भनिएका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले तत्कालिन सरकारले फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको बिरोध गरेका थिए । देउवा र विमलेन्द्र निधि जोड अहिलेपनि फास्ट ट्रयाक भारतलाई नै दिन पर्छ भन्नेमै छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले द्रूतमार्ग आफ्नै खर्चमा बनाउन बजेट समेत छुछ्याएको थियो । तर दाहालले आफूले द्रूतमार्ग सुनिश्चित गरेको वताए ।
चीनसँग नेपालको हितमा गरिएका सम्झौताहरुलाई धरासायी बनाउन भारतसँग पसारो परेर सरकार चलाएका दाहालले आफूले सन्तुलित छिमेकी नीति लिएको दावी गरे, जुन झुठो थियो । अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन अलपत्र पार्ने काम दाहालले नै गरे भने त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रद्द गराएर भारतको चाकरीमा तल्लीन रहे ।
पोखरा रुपा गाउँपालिकामा एमालेले ३ तथा कांग्रेसले १ वडामा प्यानलै जित्यो
अखिल (छैठौं) लाई किन जिताउने ?
नेपाली समाजको वर्ग–चरित्रबारे
सांस्कृतिक रुपान्तरणमा ब्रह्माणवाद - युबराज आचार्य
लामो वर्गसंघर्ष र अन्तरसंघर्षबाट खारिएका नेता
जनयुद्धका यी नेता, को लडाकु को विचारक ?
हान र भागबाट सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र युद्दको लक्ष्य अल्मलियो
यस्तो थियो माओबादी जनयुद्ध घोषणाको पहिलो अपील
मधेसमा चेतना चाहिएको कि प्रदेश ?
नेपालीले गान्धीको आदर्श किन अनुसरण गर्ने ?